Garoon ciyaar kubada cagta ka socotey oo rasaas ka dhacdey (Daawo Video) – SBC
Garoon ciyaar kubada cagta ka socotey oo rasaas ka dhacdey (Daawo Video)
Kala orod, dhul xabadsaar,ILAAHOW i bixi, maxaa halkan i keenay, tanina maxay aheyd, maanta ma maalintii iigu dambeysaa & waa wareey ayaa ka dhacdey garoon ciyaar kubada cagta ay ka socotey oo ku yaal wadanka Mexico ka dib markii rasaas is qabsatey xili ciyaartu ay mareysay 40 daqiiqo.
Ciyaartan oo ka mid ah horyaalka wadanka Mexcio ayaa dhexmarsey labada kooxood ee Santon Laguna & Morelia oo Mexico ka dhisan ayaa waxaa carqaladeeyey israsaaseyn ba’an oo dhexmartey ciidamada Booliiska & kooxo hubaysan magaalada Torreron oo ku taal waqooyi ee wadanka Mexico.
Muuqaalo TV oo laga baahiyey warbaahinta caalamka ayaa waxaa laga arki karey ciyaartii labada kooxood, garsoorihii & calan wadayaashii oo kala cararaya, iyadoo labada kooxood weerar & weerar celis isku hayeen.
Camerada Tv-ga ayaa si wanaagsan u qabatey mid ka mid ah calan wadayaasha oo ka orod badiyey ciyaartooydii oo xawaare orod kaga soo ordaya garoonka kuna socda meel uu ku gambado oo naftiisa uu ku aami karo.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa dhulka xabadka saaray, halka kuwa kale ay raadis ku bilaabeen qoysaskooda oo ku sugnaa garoonka ciyaartana daawanayey, waxaana ka mid ahaa weeraryahanka afka hore uga ciyaaraya Santos ee u dhashay wadanka Argentine Emanuel Luduena oo wiil uu dhalay gacmaha ku sita lana cararaya.
Kumaan kun oo ka mid ah taageerayaasha ayaa dhulka jiiftey, isla markaana kursaasta hoos galey halka kuwa kale ay isku gambadeen.
Dhacdadan oo ka dhacdey garoon lagu magacaaboa TSM Stadium ayaa Booliisku waxay sheegeen in aanay ku wax ku noqon dadkii ku sugnaa garoonka,balse hal askari oo ka mid ah ciidamada Booliiska ayaa ku dhaawacmey israsaaseyntaasi oo ka dhalatey ka dib markii Boolkiisku ay joojiyeen sadex baabuur oo ay wateen dabley hubaysan oo ka diiday Booliiska inay joogsadaan taasi oo keentey in rasaas ay bilaabto, ciyaarta oo mareysay 40 daqiiqo ayaa dib loo dhigay waxaana sidaasi ku dhawaaqay masuuliyiinta labada kooxdood.
Magaalada Torreron waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu shidada & dhibka badan wadanka Mexico waxaa halkaasi ka jira kooxo aad u hubaysan oo ka ganacsada daroogada, waxaa magaaladaasi lagu diley boqolaal qof rabshadaha la xiriira dagaalka ganacsiga daroogada.
Video argagax leh, ciyaartoydii oo kala cararaya & taageerayaasha kuraasta & darbiyada hoos galey link-ga hoos ka daawo.
ah ah waxaan jeclaan lahaa inuu ka dhaco garoonka kaatooliyiinta ee camp noe